Af-Xumada Imaaraadka Iyo Aamusnaanta Madaxwaynaha Somaliland, Qalinkii: Xamse Cabdiraxmaan Khayre | Haldoor News
Anwar Gargash hadalkii dhawaan ka soo yeedhay ee laf-jabka ku ahaa qaddiyada JSL maaha kii u horeeyay ee dal uu kula kaco isagoo u hadlaya si ka baxsan anshaxa iyo dhaqanka Diblomaasiyada. Waxa cusubi maaha af-xumada Anwar, waxa cusub waa in SOMALILAND noqotay dalkii u horeeyay ee markuu af-lagaadooday madaxdiisu (oo Madaxwaynuhu KU jiro) aanay iska waabin isla markaaana ilaa hadda ay is-nabayaan. Waxaa u sii dheer in waliba ay u qiil sameynayaan oo ay yidhaahdeen waa la qalad tarjumay, waa runtii oo la inama aqoonsana, iyo wuxuu ahaa waraysi hore iwm
Haddaba aan u soo noqdo Gargaash iyo wadamadii kale ee dhawaanahan uu jiidh-jiidhay iyo karbaashyadii lala dhacay. Waxaa ugu muhiimsan #Pakistan iyo #Turkey.
#Pakistan: Sanadkii 2015 ayaa huwanta sucuudigu hor kacayo ee UAE ay ku jirto ay Pakistaan ka dalbadeen inay dagaalka Yemen kula soo biirto. Arinkaas waxaa diiday intuu fadhi ka yeeshay Baarlamaanka Pakistan oo yidhi “Dhex” baanu ka nahay. Anwar Gargash oo ah wasiiru dawlaha Arrimaha dibada ayaa bartiisa Twitter-ka ugu hanjabay Pakistan isagoo ku yidhi waad “Eeddi” doontaan dhexdhexaad nimada.
Baraha Bulshada oo Twitter-ku u horeeyo ayaa dood kulul oo muddo socotay ay dadka reer Pakistaan si adag ugu jawaabayeen Anwar iyo Imaaraadka. Dhinaca Xukuumada Pakistaan, wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa hadalka Anwar ku tilmaamay “..Mid ka baxsan anshaxa iyo dhaqanka Diblomaasiyada suuban oo aan loo dulqaadan karin” wasiirka arimaha gudaha ee Pakistaan wuxuu intaa raaciyay “..Dalkayaga Iyo dadkayaguba ma gayaan cayda noocaas ah…” Wasaaradda arimaha dibada Pakistan qoraal ay Soo saartay waxay Imaaraadka ka codsatay in bartaas Twitter-ka uu oday Anwar leeyahay oo hadalkaasi Isaga ka Soo yeedhay iyo in kale….” Tiro iyo cadad ma leh siyaasiyiinta reer Pakistaan ee Anwar karbaashtay.
#Turkey: Oday Anwar Gargaash ayaa mar kale hadal cay mutaxan ah bartiisa Twitter-ka ugu qoray dalka Turkiga sanadkii 2017-dii. Wuxuu yidhi Anwar “..Dawladdii Cismaaniyiinta ee Turkigu ka Soo jeedo waxay qarni ka hor (1916) fadhataysteen magaalada barakaysan ee Madina” Hadalkaas oo uu ula jeeday markii Xijaas ay gacanta ku hayeen Cismaaniyiinta ee Ingiriis intuu Soo abaabulay qureeshtii ka hor keenay Cismaaniyiinta oo muddo 2 sano ah magaaladaas dagaal ku dhex marayay iyaga iyo Jabhadii Ingiriis watay. Waa maalinkii dhulkaa barakaysan u gacan galay reer Galbeed ee ay ka samaysteen nidaamka ilaa maanta ka taliya ee iyagana daacada u ah.
U jawaabista Gargaash, Madaxwayne Ordogaanka Turkigu cidna Kuma halayn isagaa dhirbaaxo ilaa hadda dhabanka Gargaash ka muuqata u miisaamay. Ordagaan wuxuu yidhi “…. Nin baa ciyay oo meel hoose-hoose ka hadlay oo xataa gaadhay Inuu awoowyaashayo ku sheego tuug…….. Waase calooshiisa la ciyaar ay ka hadlinayso xoogaaga lacagta ee uu haysto iyo shidaalka uu leeyahay”.
Madaxwaynaha Turkigu Twitter kama hadal ee munaasibad uu shahaadooyin ku bixinayay ayuu jawaabtaa ka celiyay. Maalmo Kadibna wuxuu Ordagaan Twitter-kiisa ku qoray “…Diblomaasi socod-barad oon ixtiraamayn xuduudaha, aan aqoon u lahayn taariikhda iyo wixii dhacay Isla markaan ka araddan akhlaaqda suuban ee diblomaasiyadu ma dhaawici karo xidhiidhkani walaaltinimo ee anaga iyo Carab naga dhexeeya.”
Waxaa xiiso gaara ah lahayd markii safaaradka Imaaraadka Ankara ay dawlada Turkigu la xidhiidhay ee masuuliyiintii Imaaraadka sharaxaad laga dalbaday. Warbaahinta dawladda Turkiguna waxay qortay in Xaafadda/Jidka Safaaradka Imiraadku ku taal ee magaalada Ankara laga bedelayo magacii hore loona bixinayo FARAKHEDDIN oo ah abaandulihii hogaaminayay Cismaaniyiinta dagaalkii Xijaas (Madina). Waa ninkii Gargaash lahaa wuxuu bililiqaystay Madina.
Ugu dambayntii, waayaha cusub ee siyaasadeed ee ay gashay SOMALILAND waa mid ay ku ciyaarayso fagaare ay ka buuxaan Gargaashyo “…Ka aradan taariikhda, Diblomaasiyada, iyo Ixtiraamka..” Waa mid u baahan siyaasad af iyo adinba lagu difaaci Karo qaran aan la aqoonsan, Nukliyeer aan lahayn sida Pakistan ama Naato aan ku jirin sida Turkiga haddana aan ka tanaasulayn karaamada, rabitaanka iyo sharafta shacabkiisa-waa Somaliland’e.
Madaxwaynaha iyo Xisbiga talada hayaa dib ha isku noqdaan inay waajibadkan gudan karaan iyo in kale. Waxaan sidaa u leeyahay 4 maalmood kadib hadalkii Anwar Gargaash 9 masuul oo Kulmiye ah ayaa hogaamiyaha Mucaaridka, Mudane Cirro, u jawaabay, halka Gargasshna ay u cudur-daareen siyaasiyiinta Kulmiye hore iyo dambeba. Ilaa hadda Wasiirkii arimaha Dibada iyo Madaxwaynuhu Imaaraadka umana Jawaabin kamana codsan raali-gelin.